Abavelisi be-UV ye-UV kunye nabaxhasi | China UV LED mveliso
Ukusebenza kokukhanya okuphezulu ngeelensi ezingama-2835 ze-UVA
Inkcazo yemveliso Imitha ye-Ultraviolet luhlobo lwemitha ye-electromagnetic, engabonakaliyo ukukhanya kodwa iyinxalenye yemitha ye-electromagnetic ngaphandle kokukhanya okumfusa okubonakalayo. Uluhlu lwe-radiation yelanga yi-100-380nm, kwaye owona mthombo mkhulu wendalo kwimitha yelanga kukukhanya kwelanga. Idlala indima ebalulekileyo kubomi eMhlabeni, ihlala ixhomekeke kubume bayo. Umthombo wokukhanya we-UV usetyenziswe ngokubanzi ekomiseni ipleyiti, ukubhengeza, ukunyanga ukukhanya kunye nezinye izixhobo, kwi ...
Ukunyanga ngokukhawuleza ukusebenza kwe-5054 UV LED
Inkcazo yemveliso Imitha ye-Ultraviolet luhlobo lwemitha ye-electromagnetic, engabonakaliyo ukukhanya kodwa iyinxalenye yemitha ye-electromagnetic ngaphandle kokukhanya okumfusa okubonakalayo. Uluhlu lwe-radiation yelanga yi-100-380nm, kwaye owona mthombo mkhulu wendalo kwimitha yelanga kukukhanya kwelanga. Idlala indima ebalulekileyo kubomi eMhlabeni, ihlala ixhomekeke kubume bayo. Umthombo wokukhanya we-UV usetyenziswe ngokubanzi ekomiseni ipleyiti, ukubhengeza, ukunyanga ukukhanya kunye nezinye izixhobo, kwi-PCB ...
Ukuthembeka okuphezulu kwe-3535 ye-UVC ukukhanya kwe-LED
Ingcaciso yeMveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-3535 ye-LED sisixhobo esisebenza ngamandla esisebenza ngombane esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okushushu kunye nokuqhuba okuphezulu. Umthombo wokukhanya kwe-Ultraviolet nge-wavelength ephezulu ukusuka kwi-270nm ukuya kwi-285nm. Eli candelo liprinta unyawo oluhambelana nobungakanani be-LED efanayo kwimarike yanamhlanje. Ubukhulu: 3.5 x 3.5 mm Ukutyeba: 1.53 mm Iimpawu eziphambili ● Ukuthembeka okuphezulu ● I-UV enzulu ye-UV kunye nobude obude phakathi kwe-270nm ukuya kwi-285nm ● Iyahambelana ne-solder ...